Ny famakafakana tombony farany hijerena ny vola miditra sy ny fandaniana
Matetika ny tompona dia manome outsource ny ampahany amin'ny fitantanana ny hofan-trano fialan-tsasatra na ny taratasin'ny trano misy serivisy amin'ny orinasa fitantanana fananana. Amin'ny fanaovana izany dia manantena izy ireo fa hanana mangarahara tanteraka manodidina ny vola mifandraika amin'ny famandrihana vahiny sy ny fandaniana mifandraika amin'ny trano. Fa inona ny fizotrany? Matetika, ny ankamaroan'ny mpiara-miasa dia mampiasa Excel takelaka hanangonana sy hanolotra vaovao momba ny vola azo avy amin'ny famandrihana. Izy ireo koa dia mampiasa ireo takelaka ireo amin'ny fandaniam-bola mifandraika amin'ny famandrihana, ary koa amin'ny fandaniana hafa alaina amin'ny anaran'ny tompony. Ity dia mandany fotoana be loatra ary mora amin'ny hadisoana, noho izany ianao tompona fananana dia mila mametraka hery sy fotoana be loatra hamitaana izany. Ary koa, ny fampiasana mpiasa ho an'ity asa ity dia hihinana amin'ny farany ambany ihany koa. Amin'ny ankapobeny dia indray mandeha isam-bolana no tokony hataonao. Ireo fizotrany ireo dia azo ihodivirana amin'ny lesoka ary na ireo mpampiantrano mikasa tsara aza dia azo atao ny manala baraka ny tompony raha mahita hadisoana tsy ampoizina izy ireo.
Mandritra izany fotoana izany, manan-danja toy ny fampiantranoana ny fahatakarana ny tombom-bolan'izy ireo isam-bolana, noho ny asa goavana takiana amin'ny fanatanterahana izany amin'ny tena izy, ny ankamaroan'ny orinasam-pitantanana fananana dia miankina amin'ny fivezivezena ho famantarana ny tombony. Ity toe-javatra ity dia mety hiteraka olana maro momba ny fitrandrahana ny fandaniana. Noho ny fandoavam-bola voaray matetika alohan'ny fialan'ny mpitsidika dia manome fahatsapana tombom-barotra diso izany. Ireo orinasa mahita tatitra diso momba ny tombom-barotra azony dia mety handray fanapahan-kevitra mety hiteraka fahavoazana amin'ny orinasany. Mitarika izany toe-javatra izany matetika Airbnb orinasa mpampiantrano hanitatra haingana loatra. Ary amin'ny farany, mety tsy ho zakan'izy ireo ny vidiny rehefa tratry ny volana osa izy ireo. Izany dia miteraka fihenjanana be sy ny filàna ny famerenana paikady vaovao amin'ny fanantenana fa mifanaraka amin'ny tatitra vaovao ianao izao.
Ahoana no ahafahan'ny Zeevou's Profit Analysis manampy?
Heverinay fa Zeevou dia manana ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny valiny marina indrindra momba ny tombom-barotra sy ny fandanianao. Ny orinasanay dia namolavola rafitra mandroso amin'ny fanaovana kajy ny tombom-barotra ho an'ny mpampiantrano sy ny mpampiasa vola (tompon-trano / tompona mampiasa mpiara-miasa amin'ny fitantanana ny fananany) hanome alalana ny vola azony sy ampiasainy ao anatin'ny orinasam-pitantanana fananan'izy ireo. Ny mpitantana trano dia afaka manondro amin'ny antsipiriany ny vola ampandoaviny ny tompony tsirairay. Ary raha io fiampangana io dia alohan'ny hampihenana ny sarany toy ny kaomisiona fantsona sy manadio.
Ankoatr'izay, nalaina ny fampahalalana momba ny kaomisiona fantsona fantsona raha misy. Ho an'ny loharano famandrihana hafa, Zeevou Hosts dia afaka mamaritra izay ambaratonga komisiona izay iasan'ny agents tsirairay azy ireo. Zeevou koa dia mandray kajy amin'ny fikarakarana karatra fandoavana karatra rehefa manamboatra ny sisiny isaky ny famandrihana.
Ny fikajiana ny tombotsoan'ny vahiny mijanona maharitra dia mety hanjary olana ihany koa. Zeevou dia nanala ny enta-mavesatra teo an-tsorokao ary nanolotra anao ny vahaolana. Ny vola miditra amin'ny famandrihana tsirairay avy eo dia mizara isam-bolana arakaraka ny isan'ny alina latsaka isaky ny volana kalandrie. Io dia mamela ny tombom-barotra avy amin'ny famandrihana lava na famandrihana izay mihoatra ny iray volana manomboka amin'ny iray volana ka hatramin'ny iray hafa mba isaina araka ny tokony ho izy fa tsy manodinkodina tarehimarika.
Ny Zeevou's Profit Analysis dia mandray koa ny tombom-barotra azo avy amin'ny fivarotana hametraka-ons. Amin'ny alàlan'ny fanesorana ny vidin'ny varotra amin'ny vidin'ny fividianana isaky ny vokatra na serivisy fanampiny izay amidy amin'ny vahiny dia afaka mandinika sy mahatakatra tsara an'io tombom-barotra io ianao. Ny sisin-tany vita amin'ny fanampiana sy famandrihana dia natokana ho an'ny mpampiantrano sy mpampiasa vola. Any fandaniana tafiditra ao amin'ny rafitra dia esorina amin'ny antoko mifanitsy aminy, mamela ny tena tombony azo amin'ny mpampiantrano sy ny mpampiasa vola.
Ireo mpampiantrano dia afaka mahazo topy maso ny zava-bitan'ny iray volana. Hahafahanao manao izany amin'ny alàlan'ny fanondranana tatitra, mivantana avy any Zeevou, momba ny tombom-barotra isaky ny fifanarahana, raha toa kosa ny mpampiasa vola afaka mahita ny tombom-barotra avy amin'ny fananany rehetra. Ireo tombom-barotra ireo dia ho hita ao anaty tatitra iray hafa ao amin'ny vavahady tompony. Azonao atao ny manapa-kevitra ny hampiseho na hanafina ny antsipirian'ny vahiny ho an'ny tompona tsirairay. Io dia ahafahan'ny mpampiantrano manome serivisy mangarahara tanteraka, ary hahafahany manatsara ny vola azo aminy sy amin'ny mpanjifany.
Amin'ny fampiasana ny endrika vaovaon'i Zeevou antsoina hoe Profit Analysis, dia afaka mamaha mora foana ny fahasarotana amin'ny fitantanana sy fandaminana ny fandanianao sy ny tombom-barotrao ianao. Zervou dia noforonina hanampiana anao, amin'ny maha-tompona trano anao, hahitanao ny vahaolana mora indrindra amin'ny olanao. Ny famakafakana tombom-barotra dia mamela anao hizara ny loharanom-bola faran'izay kely indrindra toy ny fotoana, vola ary angovo hiatrehana io lafiny amin'ny bokinao io.
Raha olana io dia mila atao ianao mangataka demo, ary avelao izahay hampiseho aminao ny fomba fananganana tranokala famandrihana mivantana anao sy hankafizantsika ireo maro hafa Toetoetra.